मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको IPO भर्न नछुटाउनु होला हेर्नुहोस कति कित्ता भर्ने – Khabarbot
मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्ता बिक्रीमा ल्याएको आईपीओमा दाेस्राे दिन करिब ३७ गुणा बढी आवेदन परेको छ । सर्बसाधारणको लागि छुट्टाएको ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्ताकाको ३६.७२ गुणा बढी हो । न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार २१ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३१ गते हुनेछ ।
भोलिदेखि काठमाडौंमा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइन्न ? पढ्नुहोस् पूर्णपाठ